युक्रेन युद्धको बीचमा पुटिनकी छोरीको विवाह टुट्यो, उनको अर्को सपना पनि चक्नाचुर
बिहीबार, १० चैत, २०७८
एजेन्सी। पुटिनकी छोरी डा. मारिया भोरोन्त्सोभाको रुसमा धनी वर्गका विदेशीहरूका लागि उच्चस्तरीय मेडिकल सेन्टर खोल्ने सपना चक्नाचुर भएको छ । साथै युक्रेन युद्धका कारण उनको विवाह पनि टुटेको छ । मारिया बालबालिकासम्बन्धी दुर्लभ आनुवंशिक रोगको विशेषज्ञ डाक्टर हुन्।
पुटिनकी जेठी छोरीको पतिको नाम जोरिट फासेन हो। दुवैका सन्तान पनि छन् । यद्यपि रिपोर्टहरूका अनुसार पतिपत्नी कहिले छुट्टिए भन्ने उल्लेख छैन ।
तर उनीहरू युद्धको सुरुवात हुनुपुर्व छुट्टिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो ।
उनीहरुका सन्तानको विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । फासेनले रुसमा लामो समय काम गरेको बताइएको छ । उनका बुबा डच सशस्त्र बलमा कर्नेल थिए।
पुटिनकी छोरीले युरोपका बिरामी र खाडी देशका धनी शेखहरूलाई उपचारका लागि रुसमा आकर्षित गर्ने योजना बनाएकी थिइन् । तर, युक्रेन युद्ध ती योजनाहरु चक्नाचुर पारिदिएको बताइएको छ ।
डा. मारिया भोरोन्त्सोभा